Gabayo iyo Qoraallo ku socda Abshir Bacadle:
Gabay ku socda Abshir Bacadle
Axad: Oct 8, 2006
Hargeysaay anaa kaa huredee mooryaan kuma soo haliileene.
Hagardamada kuwii ku baday hanjabaad kuuguma soo heeseene.
Halboowlaha kuwii ku jaray hagoog kale kuuma soo qaateene
Hangash cumaamadani hor Ilaahay kuuguma soo gabateene.
Hoostiisa isagoon eegin hadba laaca kulama soo higsadeene
Hadal meel waayay iyo cay kulama soo huluusheene
Hanti badan haddii loogu sheegay reer Alloore hungurigooda
Hadal yaraanta Rayaale haddii la arkoo lagu soo haliilayo.
Heeryadaad tuurtay hadduu raggi haatan kula goobayo.
Harta sheekhaan ku gayn hadduu maanta hadalku joogo
Hanadaddii S-taa la ismoodsiin inay ciidda hoos mareene
Heegan inaad leedahay iyo gaadh kuu holinaaya
Halyeeyo dab qaadi inay kuu kaceen heedhe maad sheegtid.
Haddaanan anigu kaa hurdin hadba doc lagaagama soo galeene
Hohe kuma rabo ninkaad tidhi kuma daba hadaafeene
Hanyaraantayduu moodi inaan ilko beelay haatane
Halkii dacawo macal uga baraty ku habsaanta maalin kale e.
Maantan hindisihoogu waa Hargaysaan galayaaye.
Hohe yaa noo kala turjuma garan maayo kuwan hadalkooge.
Hohe yaa digniin wayn u holiya dadnimo seegooda
Hohe yaa ku yidhaa eebow ha lug-gu’ina oo ku aada hawshiina.
Hadal-maluuq Abshiroow hadaad heeryaddii tuurtay
Shalay uun hadaad hambaaburtayood halaqyaddii iska saartay
Hagardaamaddii lagugu hayay haddii hibo ALLE kaa siiyay
Alxamdu halkaad ka odhan lahayd hadaad kibir caasha taagtay
Hargaysaan galayaa iyo hadduu xaalku noqday hurin colaadeed
Hilinkii Alle inaad seegtay hagoog igama saare
Hortaa intii ku lug go’aday kibirka maad hoos u eegtid
Huri colaad iyo ciidan heersare ah sayidkii hoobalayn jiray
Hayeeshee isba wakii kibirkiyo hagardaamadii eersadaye
Halyayadii kacaanka loo wada raxlee heerna gaadhe e
Na hogaami Siyaad la yidhi oo lagu wada raac hiile
Hargaysadaad u holinaysaa watay horay u eedeene
Soo mushaax hogay ku dhaceen hadaad wali soo higsanayso
Hal fudaydku Abshiroow waa hayb lagugu yaqaane
Hubsiimo li’ibaad waligaa afuuftaa uun hollace
Hadaad hurgumooyinkii jiray maata dib u soo hurinayso
Hal Alle kaama arko intaad dhiig islaam u soo haliilayso
Hiil ALLE inaad filataa waa habeen xalayoo tagaye.
Huuralayaashaad saartiyo adigu dhagar uma kala sokaysaane
Himbiriirsiga aragtidaaga gaaban ee kibirku haleeyay
Ku tidhi Hargaysaan galayaa oo hareertaan kaga dhufan hadeere
Hadalkiisa colaad islaam kii ku hurinaaya janadii seegye
Ha moogaan fidmadu dhagar islam kama hoosyasee
Hiil Allana kuma filan kartid oo waa la hubaaye.
Hayb dhan lama hadlayo ku hal qarso is tidhiye
Hawl wadeendaan doortay iyo kala saartay heegan koogiiye
Hargaysoo dhan lama hadlayo igu hoosasi is tidhiye
Haduu Rayaale khaldamo waa hawl anuun ii taale
Hoostaadoo ololi baad waligaa igu soo haliishaaye
Gondahaaga hoos uma eegtid waanad hagrataaye
Hoygooda kuwaad ku jirtid hiil kaama helaane
Haybsooc-baad ku riixdeen qabaa’il dhan ood halbowlaha jartaane
Habqankoogu wakaa meel walba yaalee gaalada hoosgalaye
Hal Alle hadaad ku socotid ood hilinkii raacaysid
Hiil maanay kaaga baahnayn inta badda ku heermi?
Hadalkaygiyo wax sheega hadaad ku hakan waydo
Haday kaa gaayn waydooy hamuumtu ku soo qaado
Ha soo hilmaamin Turki iyo Morgankii Hilblaha ahaaye
Hareertadana ka soo kaxayso guutooyinkii Horee jabaye
Hub waxaad haysatana soo qabadsii hilinka dheeraa
Hoobaan waxaad ka heshid aan aragno haatan
Hilinkii janadu inuu Hargaysa ku yaal aan aragno haatan
Hilbaha islaam waxaad ka heshid aan aragno haatan
Hurimii Siyaad inaad hogoodii ku dhacdid aan aragno haatan.
Abdirahman J. Adan
DHEGEYSI: Halkan ka dhegeyso Gabayga Bacadle ka tiriyey Jirdilka Xabsiga Hargeysa
Gabaygan la yiraahdo (Hungo) oo soo baxay 05/10/2006, waxaa tiriyey Cali Maxamuud Xiirane oo jooga UK, London.
Gabay Ku Socda Bacadle: Hawaawigu Dhabmaahee Miyaad Heesta Naga Daysid (Cabdale faarax sigad )
Sabti Oct 7, 2006
Tixdani waxay ku socotaa ninka la yidhaa Abshir Nuur Faarax (Bacadle) oo ah dadka ku taama amaba ku riyooda in ay jabhadaha xamar Somaliland qabsadaan. Waxana layidhaa tixda magaceeda-à Hawaawigu dhabmaahee miyaad heesta naga daysid
Waana tani tixduye akhris wanaagsan
Abshiroow hataataca iyo hadal xumaantiisa
Hadaad diinta hiil u tahay uma hiloowdeene.
Hamigaagu waakaa kuyidhi hawdaka soo qabo e’
Hubsanwaagu waa tii hawiye heertay waa horee
Hawraarta maansada adoon hubin maxaa hadalka kaa keenay.
Hinyi kaca iyo hamaahsiga waxbaa ku horsocdood
Hargeysiyo barbaraa lagu horkeenaaye, adigoo
hurduunbaad hawd xoraysaaye.
Hawaawigu dhabmaahee miyaad heesta naga daysid.
Afartaa hadaan hakiyo oon hoos u daadago
Hirdankiyo dagaalkaad wadaa Abshiroow Haybsi weeyaane
Haday xamar hagaag diiday ooy diintu kaHadaaftay
Oo aad hanoonini kufriga adi ku hoosjooga
Hiilbaaban soo diri lahaa iyo culimi heeryaysan
Ee hiilkiyo xumaantaad wadaan hiifay waahoree
Hawiyaa higaadini quraan waa hadal macaankaaye
Hashayduun baad rabtaa inaad haanta goysee
Habeenadan khayrka badan ee ibliis
Haanta laga buuxshat, aduunbaa dijaal
Nagu hadhoo Abshiroow soo hagoogane
Hadaad diin hawaysani bishani maba Habaaqdeene
Hido uma aad lahayn ee anaa diinta kuu
Huraye, halkaan kuugu joojaad wali ku haysaaye
Hawaawigu dhabmaahee miyaad heesta naga daysid
Halgankii hawaas iyo markaan herar xoraynaayay
Haylihii sayidku sheegaybaa malaha kugu hagoognaaye
Hada diinta lama soo dajine yaad hanoonini
Habeen baad gudaysaa dayuxu hoyday waa hora e’
Hulac iyo rasaas baan kuhelin oon timaha kaa hoolin
Hawlyraan kismaayaad gashee way ku hodintaayi
Ee hawaawigu dhabmaahee miyaad heesta naga daysid.
Hadii uu majeerteen hawiye soo horkaco manta
Oo ay hamiga soo gashaan hawdka bari gaadha
Hawaas ciise joogiyo tolkaybaan soo Horkacayaaye.
Hadii aad hawaawiga isaaq heer istidhi maanta
Anigaa hogaanshoo soo horaynaaya.
Hubka niman hindisaan Awdal ku hayaaye
Heegan bay yihiin hadaad nabada
heertaan inay xamar Hujuumaane.
Haybadaha ilaahay hibada noo siiyay sunahaa
uhoreeyo anagu kama habaabayno.
Ee hadaad hooriyoow wiil hawiye Hilib dad ruugayso
Oo aad hanoon mooday dhiiga hawdhabani
Hargeysa inaad hantidi waa habeentagaye
Cabdale faarax sigad
Abshir Bacadle: Munaafiq Shaadh Diimeed Gashaday!
Guud ahaan dadweynaha Islaamka ah iyo qof kasta oo damiir lehba waxaa farxad galiyay oo ay ku damaashaadayeen Farajkii Rabbi ee uu Allaha Naxariista badani kaga feyday shacbiga muqdisho ku nool Ciqaabtii, Fidnadii, Colaadii iyo Gumaysigii ay qabqablayaashii naxariista darnaa ay sanadaha badan ku hayeen dadweynahaasi.
Waxa amaan iyo ducuba mudnaa dhalinta iyo culimada is abaabushay ee dagaalka qadhaadh la gashay dhagarqabayaashii xoogga iyo xaaraanta ku haystay dadweynaha reer Muqdisho ee u ciilanaa inay mar uun nabad gelyo helaan kana nastaan argagaxii siyaasiyiinta faasiqa ahi ku hayeen sanadahaas murugada badan ee lasoo dhaafay.
Iyada oo hadaba ay amaan mudan yihiin culimada halgankaas soo celinta xorriyada hormuudka ka noqday, isla markaasina ay hubaal tahay in ku dhaqanka Shareecada Islaamku ay tahay mabda'a kaliya ee horumar, nabadgelyo, iyo barwaaqo adduun iyo mid aakhiraba u horseedi kara umadda Soomaalidu meel kasta oo ay ku nool yihiin, ayaa hadana waxaa soo muuqanaya askhaas tiro yar oo ka tirsan maxkamadaha balse u muuqda inay yihiin qaar munaafiqiin ah oo tashuush ku abuuraya halganka xalaasha ah Golaha Maxaakiimta.
Xubnahaas Munaafiqiinta ah oo uu Hormuud ka yahay Gabayaaga Abshir Bacadle waxaa muuqata in ninkaasi uu halis ku yahay sharafta iyo karaamada halgamayaasha shareecada Islaamka, waxaana sida ka muuqata ficilada Abshir Bacadle uu u muuqdaa Munaafiq Shaadh Diimeed gashaday oo raba inuu waji qabiil u yeelo halganka maxkamadaha isaga oo adeegsanaya ereyada iyo gabayada naxliga huwan ee kasoo burqanaya afkiisa aan daahirka ahayn.
Abshir Bacadle oo hore u tiriyay gabayo uu ugu calaacalyo kaligii taliyihii haligmay ee Siyaad Barre oo dalbanayay in dib loo soo nooleeyo derejana lagu talo, ayaa imikana waxa uu tiriyay gabay aflagaado iyo naxli huwan oo uu dadweynaha reer Somaliland ugu hanjabayo inuu qax ku ridi doono oo Dulcad iyo Harta Sheekh uu u qaxin doono.
Isaga oo Abshir sheeganaya in Muqdishona ay tahay Magaalo Islaam Hargeysana magaalo Gaalo, isaga oo hilmaamay in Hargeysa ay tahay mid dadkeedu ay nabad iyo caano ay ku nool yhiin Calan Tawxiidku ku yaalaana uu ka dul babanayay 16kii sanadood ee tagay, halka ay muqdisho ka tahay meel dadka lagu qalanayay oo dhac, kufi iyo boob uu ka socday 16kii sanadood ee lasoo dhaafay.
Iyada oo ay haboon tahay inaynu maanka ku hayno in Abshir Bacadle uu yahay Shakhsi kali ah, oo aanuu metelin Maxaakiimta Islaamka iyo xataa beesha Sharafta badan ee uu ka dhashay toona, beeshaas oo ah beel Geesiyaal ah oo la walaalo ah Beelaha Somaliland ee uu Abshir gabayaga cayda ah u tiriyay, ayaa hadana waxaa lagama maarmaan ah in Maxaakiimta Islaamku ninkaas hadalkiisa dhan isaga leexiyaan oo ay cambaareeyaan si aanuu wasakhda afkiiska ka soo burqanaysa aanuu ugu nashuushadayn halganka shariifka ah ee ay golaha maxaakiimtu kula jiraan cadawga Islaamka.
Dhinaca kale hadaan yara Jalleeco Jirdilka la sheegay in lagu sameeyay Sheekh Maxamed Ismaaciil, hadii uu jiro oo uu dhab yahay Jirdilkaasi waxaa waajib ah in Maxkamad la horkeeno askarta jirdilka samaysay iyo kuwa amarka jirdilka bixiyayba, sidoo kale waa in degdeg loo sii daayo sheekha lana hakiyo dacwada loo haysto maadaama jir dil dhacay, hadiise jirdilkaasi uu yahay mid aan jirin oo la dhoob-dhoobay waa in talaabo adag laga qaadaa askarta jeelka joogta iyo madaxada jeelka Hargeysa ee ogolaaday in filimkaas la duubo.
Xukunka Shareecada Islaamka iyo Somaliland:
Waan Jeclaan lahaa in Sheekh Maxamed Cumar Dirir iyo Sheekh Mustafe Xaaji Ismaaciil ay iigu fadhiistaan labada kursi ee ay maanta iigu fadhiyaan Daahir Rayaale iyo Axmed Yaasiin, waan jeclaan lahaa Gudoomiyaha Maxkamada Hargeysa saaxiibkay Cabdiraxmaan Jaamac Hayaan inuu Kitaabka Alle iyo shareecada Islaamka oo kaliya ku kala xukumayo ummada, halka uu maanta ka adeegsanayo Xeerarka baaniyaalka iyo qawaaniinta faasidka ah.
Waan Jeclaan lahaa inaan arko Sheekh Xasan Cabdisalaan Sheekh Cali, Sheekh Maxamed Cali Geedi, Cabdilaahi Askar iyo dhalinyarada nadiifta ah ee Ilaahay ka cabsanaysa oo hoggaanka talada dalka qabta.
Waan Jeclaan lahaa inaan arko Madaxda faasidka ah iyo siyaasiyiinta faasiqiinta ah oo ummada laga qabto, lana helo madax Ilaahay ka cabsanaysa oo Kitaabka Alle ummada ku xukunta.
Haseyeeshee waxaa arrintani ay u taalaa shacbiga Somaliland oo qudha oo iyagu hadii ay sidan rabaan u mari kara waddo kasta oo sharciga waafaqsan oo ay ku gaadhi karaan inay dhistaan madax daacad ah oo cadaalad iyo kitaabka alle ku xukunta.
Tacadiga Sh.Maxamed Cismanciil loogu gaystay Xabsiga Hargeysa oo Noqday Hadal Haynta ugu Badan ee Soomaalida Maraykanka ku Nool
Ilaa iyo markii ay ku soo bexeen shabakadaha internetka muuqaalada naxdinta leh ee muujinaya Sh. Maxamed Cismanciil loogu gaystay xabsiga Hargaysa ayaa waxaa hal mar is badalay fikradihii ay Soomaalida Maraykanka ku nooli ka aaminsanaayeen maamulka Somaliland. Mashaa’ikhda diinta oo ah kuwa loogu xurmada badan yahay Soomaalida dhexdeeda ayay dad badani rumaysan waayeen in Sh.Maxamed haraati madadaxa lagala dhaco iyada oo waxa kali ah ee loo ciqaabayaana ay yihiin aayado ka mid ah qur’aanka kariimka oo uu u fasiray sidii uu ALLE u soo dajiyay. Inta badan meelaha ay Soomaalidu ku kulanto ee dalka maraykanka sida goobaha shaqada, xarumaha waxbarshada, goobaha ganacsiga iyo masaajida ayaa waxaa markasta dhegtaada ku dhacaya magaca Sh.Maxamed Cismaanciil oo ay dadku siyaabo kala duwan uga hadlayaan.
Arinka ugu weyn ee lahadal hayo ayaa ah sida ay xukuumada Soomaaliland ugu bareertay in ay been abuur ku tilmaanto cajalada sida cad u muujinaysa muuqaalka sheekha oo ay lugaha silsiladi uga xiran tahay isla markaana karbaash iyo haraati lala dhacayo. Mid ka mid ah odayaasha Soomaalida ee degan maalada Rochester ee gobolka Minnesota ayaa yiri “Hadii ay cajaladaasi been abuur tahay ma jirto cajalad danbe oo la rumaysan karo, waxa sheekha lagula kacay waxay u muudaan sida qoraxda oo kale”
Qodobka labaad ee ay dadku is waydiinayaan ayaa ah bal waxa uu yahay danbiga sheekha loo haysto. Labada nin ee doonaya in ay sheekha hadalka ka dhaliyaan ayaa waxay ku doodayaan labo arimood oo kala ah 1) Sababta uu sheekhu wax uga sheegay dawladaha Maraykanka iyo Itoobiya oo ay ku sheegeen saaxiibada Somaliland iyo 2) In uu sheego meesha uu jiro nin la yiraahdo Maxamed Cali Geedi oo shirkadii Al-Barakaat xisaabiye u ahaan jiray. Arintaasi ayaa fajiciso ku noqotay dadkii cajalada fiirsaday iyaga oo ku dooday in iyada oo uu tobaadkasta Aqalka Cad ee Maraykanka looga taliyo hortiisa ka dhoco banaabaxyo lagu canbaaraynayo siyaasadaha dowlada Maraykanka in wadaad jooga geeska Afrika loo ciqaabo hadal uu ka sheegay Maraykanka. Boodigoobka ay Somaliland ugu jirto shaqaalihii Al-Barakaat ayaa iyaduna noqotay mid ay ku jaahwareereen Somalida Ameerika ku nool iyada oo ay Al- Barkaat dhowaan rajaynayso in loo fasoxo hantidii ay wadamo badani ka xayireen kadib markii ay cadaatay in aanay wax xiriir ah la lahayn waxa argagixisada loogu yeero.
Si kastaba ha ahaatee walaaca ay Soomaalida Maraykanka ku nooli ka muujiyeen tacadiga Sh.Maxamed Cismanciil loogu gaystay xabsiga Hargeysa ayaa ah mid uu la wadaago qof kasta oo Soomaalia ah oo leh damiir islaanimo iyo mid wadaninimo waxaana ay arintani meesha ka saaraysaa beer laxawsigii ay Somaliland dunida ugu sheegi jirtay in ay tahay jamhuuriyad uu ka jiro nidaam dowladeed oo ilaaliya sharafta muwaadiniinta ee aasaasiga ah.
Halkaan Ka daawo Jirdilka Shiikh Maxamed Ismaaciil inaa Lilaahi wa inaa ilaahay raajucuun